Fivadihan’ny kamiaon’ny BNGRC :: Miaramila efatra avy namboly hazo niara-maty • AoRaha
Fivadihan’ny kamiaon’ny BNGRC Miaramila efatra avy namboly hazo niara-maty
Miaramilan’ny Tafika miisa efatra no niara-maty, omaly tokony tamin’ny 12 ora antoandro, vokatry ny lozam-piarakodia nitranga tany Ambahatrazo-Manakara. Ankoatra ireo dia miaramila miisa fito amby roapolo no naratra. Avy namboly hazo izy ireo ary handeha hody any Manakara izao tra-doza izao.
“Lalana mahitsy be no nitrangan’ilay loza. Nivoaka ny lalana ilay kamiao “benne” ka nivadibadika. Miaramila telo no namoy ny ainy teo no ho eo. Iray hafa tonga tany amin’ny hopitaly Manakara no tsy tana ny ainy. Misy amin’ ireo maratra no tena voa mafy. Ny dona mafy nihatra tamin’ ireo miaramila, avy amin’ny vy lehibe amin’ny “benne” aorian’ny fiara, no nahatonga ireo naratra tena voa mafy”, hoy ny loharanom-baovao avy any an-toerana.
“Avy namboly hazo nia­raka tamin’ny prefektiora ireo miaramila ireo dia nalain’ny fiaran’ny Bngrc hody any Manakara. Ny tatitra azoko hatreto, ankoatra ireo namoy ny ainy miisa efatra, dia miisa dimy ambin’ny folo ireo miaramila maratra tena voa mafy. Mandray an-tanana sy izay fepetra rehetra izahay amin’izao fotoana izao hitsa­boana ireo maratra. Misy ihany koa ny fandraisana andraikitra amin’ny fikara­karana ireo namoy ny ainy”, hoy ny jeneraly Rakotonirina Léon Richard, minisitry ny Fiarovam-pirenena.
Hatramin’ny omaly dia tsy mbola fantatra izay anton’ity loza mahatsiravina ity. Kamiao vaovao marika Daewoo, izay vao azon’ny Bngrc volana vitsy lasa izay, ilay nivadika. Mipetraka eo anivon’ny prefektiora ireo fitaovan’ny Bngrc any anivon’ ny distrika ka izay no antony nampiasana azy nitondrana ireo miaramila avy namboly hazo, araka ny loharanom-baovao avy any an-toerana.
Ady amin’ny kolikoly :: Hanamora ny fanenjehana an’ireo tsimatimanota ny Fitsarana
Fanatsarana ny tontolon’ny asa :: Nifanekena ilay karama farany ambany roa hetsy ariary